Faah Faahinta heshiisa Sanchez uu ugu biirayo Man United oo la shaaciyay (Imisa ayuu mushaar u helayaa?) – Gool FM
(Manchester) 17 Jan 2018 Alexis Sanchez ayaa heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Manchester United oo uu haatan ku dhawyahay inuu ku biiro sida ay baahisay Telegraph.
Weerar yahanka Arsenal ayaa u saxiixaya kooxdiisa cusub heshiis 4-sano iyo bar ah, wuxuuna mushaar u heli doonaa sanadkii lacag dhan 14 milyan oo Ginni oo canshuuri aysan ku jirin.
Sanchez ayaa haatan sugaya in Henrikh Mkhitaryan uu dhankiisa heshiis la gaaro Arsenal si loo dhameeyo heshiiskiisa Manchester United.
Heshiiska 29 jirkaan uu ugu wareegayo Man United ayaa ku kacaya lacag gaaraysa ilaa 60 milyan oo Ginni, marka lagu daro qiimihiisa oo ah 30 milyan iyo wakiilkiisa oo qaadanaya lacag kor u dhaafaysa 10 milyan iyo lacagaha kale ee ku baxaya saxiixiisa.
In laacibku uu ka soo muuqdo Old Trafford waxaa haatan ka harsan oo kaliya in Henrikh Mkhitaryan uu la heshiiyo Arsenal, waxaana la fahansanyahay in laacibka reer Armenia uu Gunners ka doonayo mushaar qaali ah.